Lala ngokuthula Gqigqizela - Bayede News
Home » Lala ngokuthula Gqigqizela
by nguNathi Olifant
UOliphant uyithatheli emkantshubovu kanye nongoti wezokuxhumana kuhulumeni.
Ngiqale ukuhlangana nale ngqalabutho kwezobuntatheli nokuxhumana ngenyanga uNhlaba onyakeni wezi-2004. Akupholanga maseko sabe sesingamathe nolimi nale nsizwa enohleko namahlaya ahlekisa umuntu ebhacile.
Ufike ezosebenzela iphephandaba lesilungu elidumile eMgungundlovu iThe Witness lapho wayezobika khona ngezindaba zoHulumeni Basekhaya. Angikusho kucace nje bha ukuthi lo msebenzi wayewenza ngobunyoninco obuyisimanga fithi kwalikhuphula kakhulu igama lakhe kwezobuntatheli kangangoba ngisho esehambile kuleli phephandaba kwaphela iminyaka eminingi ingosi ibizwa ngo: Pewa To The People.
Bengisakhuluma ngohleko lwale nsizwa umfo kaMapungubwe. Ngosuku nje lokuqala efikile eThe Witness ngambona ebeke imilenze phezu kwedeski ekhuluma esebenzisa ucingo lomlungu. Ukwenza nje lokhu womile insini. Uma ngimbuza emuva kweminyaka thizeni naye akasakhumbuli yini lena eyayimbulala kanjena.
Imvamisa uma ufika endaweni entsha yokusebenza uye uzothe, ukhophozele ngoba abantu awubazi. Nathi nje sasihlale sizithobile futhi abelungu bebaningi kunathi emagumbini ezindaba.
Cha, umfo kaPewa akakugqizanga qakala lokhu. Wayememeza nje futhi ubona ukuthi ufike kubo lapha. Isimanga ukuthi abelungu base bemthandela lokhu kumemeza kwakhe futhi wagcina esengumngani wawo wonke umuntu.
Ngalesi sikhathi sasibancane siphakathi kweminyaka yama-20. Cishe sasiphakathi kwelinye lamathimba ezindaba ayehalelwa yiwo wonke amaphepha njengoba ngaleso sikhathi iThe Witness yayiphethe izingqalabutho okuyizona ezazishaya isicathulo ukuthi kubikwa ngani bese elandela wonke amaphephandaba esilungu esifundazweni.
Sasihamba sonke isifundazwe seNdlovukazi uMthaniya sicoshela khona izindaba, sihlangana nezitha nabangani ngokufanayo kwezepolitiki.
Ubungoti bukaPewa babonakala kakhulu ngendlela ayekwazi ngayo ukuxhumana nabantu nokwazi imithetho ephethe isigaba soHulumeni Basekhaya lokhu esithi phecelezi iMunicipal Systems Act and Municipal Structures Act.
Ngalena nje kokuvakashela igudu lakhe okwakumenza abhale unqambothi lwezindaba ngesilungu, uPewa wayenekhono lesidalo nje.
Umkhakha kaPewa wawungagcini nje ngaleli khono lokubhala kodwa isithombe ubesinenebula kakhulu.
Uthando lwakhe lokuthwebula lwenza aze aqale nomfowabo, inkampani ebizwa ngeSawep Media Photography ethatha ingcwenga yezithombe zohlobo lonke.
Lapha kuhlanganisa izithombe zomsebenzi zezinkampani ezinkulu, abesifazane abongozime, abesifazane abafisa ukuba nezithombe zabo behambaze, abaculi nabanye.
Kodwa engizosikhumbula kakhulu isithombe asishaya kwaNobamba eWeenen sengoma yamaChunu esina egqoke uBrentwood omnyama eqimbile ngenhla embozwe olweziChwe uthuli imbadada nodabuluzwane kusemoyeni. Kwaphinde saba ngabokuqala izintatheli ezingena emzini wenjinga uSbu noShauwn Mpisane eLa Lucia ukubona umcebo wabo, ethwebula mina ngibhala ngowezi-2009.
Kuningi esizomkhumbula ngakho kodwa uma nje ngiphuma kwezithinta umsebenzi, singena empilweni yakhe nje yangasese.
Ibinesandla le nsizwa iphana kakhulu. Ibike nje ikusukele ikunike imali kaphethroli kade uyivakashele, uthi uyanqaba ayifake ekhukwini lakho ngenkani.
Ubelishaya nebhodwe epheka okwehla esiphundu ukudla lokhu, yize lokhu uma umvakashele ubekwenza ebe ekusuzela, ekuthimulela futhi uma ukhononda akokhe ngenkulu insini lena engezokugqiza qakala.
Kanti futhi ngiyobe angibenzi ubulungiswa uma ngingasho ukuthi uswahla lolu bekuyisoka lamanyala lingaconsi kwabesibhuda futhi engikholwa ukuthi bebemthandela umoya wakhe omuhle, amancoko nobugeza nje.
Bebeze bameluke bamuqhine lesi sihluthu sakhe ekade aziwa ngaso njengoDon King, ingqalabutho yase-USA kwezokugqugquzela umdlalo wesibhakela. Ubenothando lomculo weRap ikakhulukazi uTupac noJay-Z, leliBhakabhaka futhi belithanda umdlalo weBasketball nomdlali owaduma kuwona uMichael Jordan.
Kanti futhi angikubalile ukuthi le nsizwa ibikade iyile esikoleni ngoba bheka ibisho ngezinqu zeHonours kanye neMasters. Ngiyethemba uMdali nabakubo bazomemukela ngalo lolo hleko lwakhe ayelushaya kudume izihosha.
Besinetemu esibingelelana ngalo elithi: Rikhomeni ringa pheri okwakuyisidlaliso seqembu elithile lebhola laseLimpopo esithi nje kwakuchaza “libambeni lingashoni”. Uphumule mngani wami, uphumule Gqigqizela!
nguNathi Olifant Jul 1, 2020